Weji diiran: waa maxay, sida loo sameeyay iyo astaamaha | Saadaasha Shabakadda
Waxaan ognahay in cufnaanta hawadu tahay hawo waawayn oo hawo leh taas oo ay kujiraan qoyaan iyo xaalado heerkul oo kaladuwan oo tilmaamaya nooca cufnaanta hawada ee aan ladhaqmayno Cufnaanta hawadan waxay qaataan astaamaha aagga ay ka sameysan yihiin waxayna ku tiirsan yihiin dhaqdhaqaaqa ay abuuraan markii la abuurayo. Waxay kuxirantahay xasilloonida cufnaanta hawada waxaan ka heli karnaa noocyo kala duwan oo hore. Maanta waxaan ka hadlaynaa foodda diiran iyo astaamahooda.
Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato asalka iyo cawaaqibka wejiga diiran, kani waa boostadaada.
1 Cufnaanta hawada iyo xasilloonida jawiga
2 Hore diiran
3 Cimilada hore ee diiran
Cufnaanta hawada iyo xasilloonida jawiga
Si loo fahmo waxa weji diiran yahay, waa inaan ogaanno dhaqdhaqaaqa jawiga ee la xiriira shaqeynta cufnaanta hawada. Degganaanshaha dhammaan cufnaanta hawadu waa waxa go'aamiya cimilada jawiga ee ku dhaca aag cayiman. Markaanu leenahay hawo xasilloon waxaan ka hadlaynaa aag aan dhaqdhaqaaqyada aan loo oggolaanaynin inay istaagaan. Sidaa darteed, sameynta daruuraha roobabku ma dhici karaan. Marka ay jirto xasiloonida jawiga, waa wax aad u habboon in laga hadlo xinjirowga lidka ku ah. Halka hawada deggan ay doorbideyso cimilo wanaagsan.
Dhinaca kale, marka ay jirto hawo aan degganeyn, waxaan aragnaa in dhaqdhaqaaqyada taagan ay yihiin kuwo loo xaglinayo oo daruuraha roobka lagu soo saarayo cimilo xun. Xaaladahaani waxay la xiriiraan niyad jab maaddaama ay jiraan hoos u dhac ku yimaada cadaadiska jawiga iyo abuurista duufaan.
Haddii cufnaanta hawadu ku wareegto dusha sare ee qabow, waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay hawo diiran. Dhaqdhaqaaqa guud ahaan dusha sare oo leh heerkul hoose ayaa bilaabi doona inuu qaboojiyo qaybta ugu dhow dhulka. Sidan, sida hawada dusha sare qabowgu wuxuu bilaabmaa culeys iyo culeys. Noocyada noocan ah, dhaqdhaqaaqyada hawada ee toosan ayaa laga hor tagayaa, sidaas awgeedna waxay abuurayaan hawo deggan. Xasiloonidaani waxay u taagan tahay haysashada dabaylo daciif ah, leexasho heer kulka oo toosan, taas oo keenta kororka boorka wasakhda ee ku jira lakabyada hoose. Deganaashahan ayaa dhibaato ku ah magaalooyinka ugu wasakhaysan. Waxaan sidoo kale aragnaa dhibaatooyin qaar ka mid ah aragtida buuxda iyo daruuro yar oo leh horumar toosan.
Dhinaca kale, haddii cufnaanta hawadu ku dul wareegto dusha ka diiran waxaa loo yaqaannaa hawo qabow. Markay ku wareegeyso dusha sare, saameynta ka soo horjeedda ta aan soo sheegnay ayaa dhaceysa. Waxay bilaabi doontaa inay kuleyliso saldhigeeda waxayna noqon doonaan kuwo cufan, taas oo u roonaan doonta dhaqdhaqaaqa toosan. Tani waxay isu bedeshaa cimilo aan degganeyn oo sababa kororka xoogga dabaysha, horumar xagga muuqaalka ah, laakiin horumarinta daruuraha iyo roobab.
Sidaan horayba u aragnay, cufnaanta hawadu waxaa lagu gartaa iyadoo leh xaalado isku mid ah heerkulka iyo huurka intaba. Taasi waa sababta ay tahay inaan ugu kala saarno cufnaanta hawo dusha sare ee joojinta. Waxay kuxirantahay astaamaha ay ku leeyihiin xadka cufka hawada, waxaan arki karnaa sameynta weji diiran, weji qabow, wejiga hore ama mid taagan.
Wejiga hore iyo diirimaadka ayaa la sameeyaa marka tiro hawo diiran ay gaarto mid ka mid ah hawo qabow. Hawada kulul waxay u egtahay inay kor uga kacdo cufnaanta hawada oo leh heerkulka ugu hooseeya. Qiyaasta hawadan hoose ee hawada waxaa loo yaqaanaa qaybta qabowga. Marka miisaska hawadu isku dhacaan, uumiga iyo samaysanta daruurta ee ku xigta ayaa sababa. Muuqaalka ugu muhiimsan ee hore iyo diiran ayaa ah inuu leeyahay jaranjaro yar. Taasi waa in la yiraahdo, badanaa wuxuu ku socdaa xawaare celcelis ahaan gaaraya 30 km / saacaddii oo wuxuu leeyahay daruur dhererkeeda dhererkiisu yahay 7 kiiloomitir. Tan macnaheedu waa in daruuraha ugu badan ay yihiin daruuro hooseeya iyo kuwo dhexdhexaad ah.
Daruuraha iyo roobabku waxay ku horumaraan dusha sare ee xiriirka u dhexeeya labada hawo. Inta udhaxeysa muuqaalka daruuraha ugu horeeya iyo bilowga roobabku waxay dhici karaan inta u dhexeysa 24-48 saacadood.
Cimilada hore ee diiran
Aynu falanqeyno cimilada noo keenta weji diiran. Xaaladda jawiga hawada ee sababa hore iyo diirimaadka waxay ka bilaabmaysaa muuqaalka daruuro sare. Daruurahan sare waxaa loo yaqaan daruuraha cirrus. Waxay u muuqdaan inay ku sugan yihiin ama ku dhow yihiin maskaxda 1000 kiiloomitir ama ka badan xagga hore. Cadaadiska hoos u dhaca wuxuu badanaa bilaabmaa sababo la xiriira hawo diiran oo kordheysa iyo ka bixida hawada qabow.
Si tartiib tartiib ah, waxaan aragnaa sida cirku daruuro u noqdo markuu u soo dhowaado qaybta ugu muhiimsan ee khadka aan degganeyn. Daruuraha cirrus ayaa noqda cirrostratus-ka sii dhumuc weyn leh si loo sameeyo altostratus. Waxay kuxirantahay xasilloonida hore, waxay kudareemi kartaa xoogaa daadasho ah inta lagu jiro samaynta daruurahaas. Waxaan aragnaa in qiimayaasha cadaadiska ay sii socdaan hoos u dhaca xawaaraha dabayshana uu kordho. Waxaan ogsoonahay in dabayshu u socoto jihada meelahaas oo culeys yar ka jiro. Sidaa darteed, haddii hoos u dhac ku yimaado cadaadiska dusha sare markay hawadu kulushahay, dabayshu dhankaas ayey u socon doontaa.
Ugu dambeyntii, nimbostratus ayaa soo muuqda. Noocyada daruuraha ah waxay ku yaalliin isla afaafka hore waana halyeeyada roobabka ugu muhiimsan. Dabayluhu waxay gaarayaan xoogooda ugu badan cadaadiskuna wali wuu sii yaraanayaa. Daruuraha hoose sidoo kale waxay u muuqdaan inay yimaadaan, sida dabaqado ay ku samaysmaan qoyaan badan sababtoo ah roobka da'ay. Qaar ka mid ah daruurahaas oo keli ah ayaa mas'uul ka ah qarinta daruuraha kale ee sare waxayna soo saaraan ceeryaamo hore. Mararka qaar, Ceeryaanku wuxuu siin karaa dhibaatooyin aragga dusha sare.
Jihooyinka hore waxay u socdaan si aad u daciif ah waxayna badanaa soo saaraan roobab daciif ah oo dhexdhexaad ah. Sifada ugu horaysa xaga hore iyo diirimaadka ayaa ah inkasta oo ay yihiin roobab dhexdhexaad ah oo daciif ah, waxay ku dhaqmaan dhul ballaaran iyo waqti dheer. Kuwani badanaa waa daqiiqado qabow xilliga dayrta dhammaadkeeda ama horraanta gu'ga ama xilliga qaboobaha. Waqtigaan roobku wuxuu qaadan karaa qaab baraf ah waxaana loo beddelaa qabow wuxuuna ku dhammaadaa roob.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto wejiga diirran iyo astaamahiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Hore diiran